အိတ်တလုံးရဲ့ တန်ဖိုး…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အိတ်တလုံးရဲ့ တန်ဖိုး….
Posted by hmee on Jun 1, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 24 comments
မနေ့က ကျွန်မရဲ့ အိမ်နားက စတိုးဆိုင်ကြီးကို သွားခဲ့ပါတယ်။ လိုအပ်တာတွေ ၀ယ်ဖို့ပါ။ အမြဲတန်း အိမ်မှာ လိုအပ်တာတွေ ရှိပြီဆိုတိုင်း သွားနေကြမို့ အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အစုံအလင် ရတော့ ကောင်တာမှာ ငွေရှင်း။ ဒီမှာ ထူးခြားတာ တခုက မိမိဝယ်တဲ့ပစ္စည်း မိမိဘာသာ ထည့်ရတယ်။ ငွေရှင်းကောင်တာမှ ၀န်ထမ်းက ထည့်မပေးပါဘူး။ တခုပြီးတခု တွက်ချက်ပြီး ဘေးကိုတွန်းချလိုက်တယ်။ ကျသလောက်ငွေကိုရှင်း ပြီးရင် ဘောင်ချာပေး နောက်တယောက်ကို ထပ်ရှင်းတာမို့ ကိုယ့်ပစ္စည်း ကို့ဘာသာထည့်ပေါ့။ ပစ္စည်းတွန်းချလိုက်တဲ့ ဗန်းလိုနေရာ အကျယ်ကြီးဘေးမှာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေ ထည့်ထားတဲ့ စက်ရှိပါတယ်။ တအိတ်ယူလိုက်ရင် နောက်တအိတ် အလိုလို တက်လာပါတယ်။ အသားငါးတွေကို သပ်သပ်၊ အသီးအရွက်က တခြား၊ သားအတွက်မုန့်က တထုတ် စသည်ဖြင့် မိမိဘာသာ စိတ်ကြိုက်ခွဲထည့်။ ဒီလိုမှ မကျေနပ်သေးလို့ (အားမရသေးလို့) အပို လေးငါး ဆယ်လုံး ယူလည်း ဘာမှမပြောပါဘူး။ ကြိုက်သလောက် ယူခွင့်ရှိပါတယ်။ ဈေးတွေမှာလည်း ဆိုင်တိုင်းရဲ့ မျက်နှာစာမှာ အိတ်တွေ ချိပ်ထားတာမို့ တမျိုးတအိတ်ထည့် ဆိုင်ရှင်ကိုပေး ဆိုင်ရှင်က တွက်ချက်ပြီး အိတ်အကြီးကြီးထဲ ထပ်ပြီး စုထည့်ပေးပါတယ်။ အိတ်တွေ ပေါခြင်းသောခြင်း ယူလို့ရတဲ့အကြောင်း ပြောတာပါ။ ဒါပေမဲ့ တနိုင်ငံလုံး ဘယ်နေရာသွားသွား ကြွပ်ကြွပ်အိတ် အမှိုက်တော့ မတွေ့မိဘူး။ ဒါလည်း စည်းကမ်းကောင်းလို့ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေ ထားပါတော့ အိတ်အကြောင်း ဆက်ပါဦးမယ်။ ကျွန်မလည်း ဈေးဝယ်ပြီးလို့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ထရော်လီလေး ဘေးချ ပစ္စည်းတွေ ထုတ်ပေါ့။ အသားငါးတွေကို ရေဆေး ရေခဲသေတ္တာထဲထည့် ၊ သားအတွက် မုန့်တွေကို သူ့နေရာသူထား။ အားလုံးပြီးတော့ အိတ်တွေအိတ်တွေ အပုံလိုက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မအကျင့်တိုင်း အမျိုးအစား ခွဲပြီး ပုံထားပါတယ်။ သား၊ငါး ထည့်တာတွေက ညစ်ပတ်နေလို့ အမှိုက်ပုံးထဲကို တခါတည်းထည့်။ အသီးအရွက် ထည့်လာတာတွေက နောက်တခါ အမှိုက်ပုံးမှာ စွပ်ဖို့ အံ့ဆွဲထဲထည့်။ တခြား ကုန်ခြောက်ထည့် လာတာတွေကတော့ သန့်ရင်သန့်သလို ပြန်သုံးဖို့ နေရာတွေ ခွဲပြီး ထားပါတယ်။ အ၀တ်အစားလေး ၀ယ်လာလို့ အိတ်ကောင်းကောင်း လှလှလေးနဲ့ ထည့်ပေးလိုက်တာများဆို ဦးစားပေး တယုတယ ခေါက်သိမ်းပေါ့။ အဲဒီမှာ ကျွန်မ ဘာတွေးမိတယ် ထင်ပါသလဲ။ အိတ်တလုံးရဲ့ တန်ဖိုးကိုပါ။ အိတ်ဆိုတာ ပစ္စည်းတွေ ထည့်ဖို့ သယ်ယူရတာ လွယ်ကူအောင် ထွင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းပါ။ ဒါပေမဲ့ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းပေါ် မူတည်ပြီး တန်ဖိုးက ကွာသွားတယ်ဆိုတာ သတိပြုမိလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ တဆက်တည်း ထပ်ပြီးတွေးမိပြန်ပါတယ်။ မိန်းမတယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကိုပါ။ ဘာမှလည်း မဆိုင်ဘူး ဆိုပြီး အတွေးရှုပ်သွားမယ် ထင်ပါတယ်။ နဂိုအရင်းခံ စိတ်ကိုက ကြံကြံဖန်ဖန် အတွေးခေါင်တဲ့မိန်းမလို့ ကျွန်မ အမျိုးသားက ကျွန်မကို သမုတ်ထားတာပဲ။ အမှန်တကယ်လည်း တခါတခါ အတော်အတွေးခေါင်တာကိုး။ အလကားရတာမို့ အမြဲတွေးဖြစ်သလား မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်မ ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ ကျွန်မတို့ အမြဲလေးစားရတဲ့ အမ တယောက်ရှိတယ်။ တက္ကသိုလ်က ဆရာမပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုက ဘယ်လို ဖြစ်လဲ မသိဘူး (ကျွန်မကတော့ နီးစပ်မှုလို့ ထင်တယ်) သူစာသင်ပေးနေတဲ့ ဆယ်တန်းကျောင်းသားလေးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပါတယ်။ အခုထိလည်း မအောင်သေးပါဘူး။ အရင်ကတော့ သာရေး၊ နာရေးတွေ သွားတိုင်း သူ့ဂုဏ်နဲ့သူ အတော်နေရာရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း သူ့တန်ဖိုးကို သူ့ယောက်ကျား ဂုဏ်က အရောင်ထင်လာလို့ မျက်နှာငယ်ရပြီမို့ ပွဲတွေမှာ အရင်လို မတွေ့ရတော့ဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ဆိုက်ကားသမား မိန်းမနဲ့ ကျောင်းဆရာမိန်းမ ဂုဏ်ခြင်းမတူပါဘူး။ ဒီထက် ပိုပြောရမယ်ဆို ၀န်ကြီးကတော်၊ အရာရှိကတော်လောက် အောက်ခြေ၀န်ထမ်းမိန်းမကို ဘယ်သူကမှ အရေးတယူ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစနဲ့ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနေတဲ့ မိန်းမများနဲ့ ရှာမှရှား နိုင်ငံခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးများတော့ ခြွင်းချက်ပါ။ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်က ယခုလက်ရှိ ယောက်ကျားကိုမှီခို နေရတာမို့ မှီခိုတွေကို အဓိကထား တွေးနေမိတာပါ။ ယောက်ကျားရဲ့ ဂုဏ်ကြောင့် မိန်းမမှာလည်း တန်ဖိုးတက်လာပါတယ်။ မိဘလက်ထက်မှာ ဘယ်လို အခြေအနေပဲရှိရှိ အိမ်ထောင်ကျပြီဆို ယောက်ကျားရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ရောင်ပြန်ဟပ် ခံရစမြဲပါ။ မိဘက အရာရှိကြီးမို့ အရာရှိသမီး ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ မိမိလက်ထက်မှာ ဆိုက်ကားသမား ယူရင် ဆိုက်ကားသမား ကတော်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ဆိုက်ကားသမားယူပြီး အရာရှိကတော် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။ ယောက်ကျားရဲ့ တန်းဖိုးနဲ့ လိုက်ပြီး ကိုယ်ပါ တန်ဖိုး သတ်မှတ်ခံရမှာ မလွဲပါဘူး။ ဆရာဝန်မိန်းမဆို ဆရာဝန်ကတော်၊ ၀န်ကြီးမိန်းမဆို ၀န်ကြီးကတော်ပေါ့။ ယောက်ကျား ဂုဏ်ရှိရင် ရှိသလို ကိုယ်ပါ တန်ဖိုးလိုက်တက် လာတာပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ ဘာတွေးမိသလဲဆို မိန်းမတွေဟာ အိတ်တွေနဲ့ တူတယ်လို့ပါ။ မီးသွေးထည့်ရင် မီးသွေးအိတ်၊ သဲထည့်ရင် သဲအိတ်၊ ဆန်ထည့်ရင် ဆန်အိတ်။ အဲ…. တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စိန်၊ ရွှေ၊ ငွေ ထည့်ထားတဲ့ အိတ်ဆို စိန်ရွှေငွေအိတ်ပေါ့။ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းပေါ် မူတည်ပြီး အိတ်တွေ တန်ဖိုး ကွဲသွားပါတယ်။ နောက်ပြီး ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ် တည်ပြီး အဲဒီအိတ်တွေကို တန်ဖိုးထားတာခြင်းလည်း မတူကြပါဘူး။ ရွှေငွေအိတ်ဆို တန်ဖိုးရှိတာမို့ တယုတယ အတွင်းခန်းမှာ ထားမှာပါ။ ဆန်အိတ်ဆိုရင်တော့ မီးဖိုချောင်ပို့မှာဖြစ်သလို သဲအိတ်၊ မီးသွေးအိတ်လို အိတ်တွေကတော့ အိမ့်အောက် ချောင်မှာ ထိုးချင်ထိုးထားမှာပါ။ အဲဒီလိုပဲ အိတ်နဲ့ အလားသဌ္ဒါန် တူတဲ့ မိန်းမတွေဟာ အထဲက ပါဝင်ပစ္စည်းနဲ့တူတဲ့ ယောက်ကျားတွေကြောင့် ဂုဏ်တက်ရတာ၊ ဂုဏ်နိမ့်ရတာမို့ မိန်းမတွေဟာ အိတ်နဲ့ တူပါလားလို့ ကျွန်မတွေးမိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပုပု၊ ရွယ်ရွယ်၊ ငယ်ငယ်၊ ကြီးကြီး၊ ပိန်ပိန်၊ ၀၀ မမလှလှများ တန်ဖိုးရှိသော အိတ်များ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်……………….
PS. ကျွန်မရဲ့ အတွေးသက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ မှားသွားတယ်ဆိုရင်လည်း သည်းခံပြီး ဖတ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးကုဋေပါ။
ပထမ ယူထားတဲ့ အိတ်ကလေး ပြဲသွားတော့ နောက်ထပ် အိတ်တခု ထပ်ယူလိုက်တယ်။ ယူတုန်းကတော့ အိတ်စုတ်ပါပဲ..
အချိန်အခါ သင့်တော့ ကံတရားလေသင့်လို့ ရွှေမှုန်တွေ ကပ်ပြီး စိန်သီးနေပါတယ် ရှင်..
ဘယ်လို အိတ်မျိုး ဖြစ်မယ် ထင်ပါသလဲ။
တော်တော်ရှားတဲ့ အိတ်လေးလေ သူက တစ်လုံးတည်းရှိတယ်
ကျွန်တော်တို့ယောက်ကျားတွေအနေနဲ့ တော်တော်ကို ဆင်ခြင်ရပါတယ်ခင်ဗျ
ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ရရာအိပ်ထည်း ကောက်ထည့်မိမှ
အိပ်ကြီးက ဟောင်းလောင်းကြီးများ ဖြစ်နေရင်
ယောင်္ကျားတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကို အိတ်နဲ့ တော့ နှိုင်းယှဉ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အိတ်ဆိုတာ သက်မဲ့ပစည်းဖြစ်သလို လူတွေအဆင်ပြေသလို သုံးစွဲနေကြတဲ့ ပစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်းမလှပေမဲ့ အချင်းလှတယ် ဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်လေ။ ဒီခေတ်ကြီးရဲ့အတိုင်းအတာ အရ အိတ်နဲ့နိူင်းလို့ မရဘူးလို့ထင်တယ်။ ယောင်္ကျားဆိုတာ အိတ်လို လိုသလိုဆွဲသုံးလို့ မရနိုင်သလို မိန်းမတွေကလည်း အလွယ်တကူဆွဲမသုံးကြပါဘူး။ ဂုဏ်သိကာကွာခြားခြင်းသည် ချစ်ခြင်းမေတာဖြင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆမိပါကြောင်း။(မှတ်ချက်။ ဝေဖန်ချက်သည် ကျွနုပ်၏ အဖြစ်အပျက်နှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ မြင်ရသည်များကိုသာ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ကလေးမ စာသေချာဖတ်။ ယောကျာ်းကို အိတ်နဲ့ နှိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး …. ။
ဂုဏ်သိကာကွာခြားခြင်းသည် ချစ်ခြင်းမေတာဖြင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆမိပါကြောင်း ဆိုတာလည်း ကန့်ကွက်ပါတယ် … ။ တကယ်သာ မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်လျှင် ဂုဏ်သိက္ခာလည်း ထည့်တွက်နေတော့မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက်ပါပဲ..
<<<< မန်းလိုက်တာ ပို့စ်နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး မမှီရေ…
etone မေက အမြဲတမ်း မှားတတ်တယ်။
ခုနကလည်းကောမန့်တစ်ခု အဲလိုပဲမှားလို့ ပြောပြထားတယ်လေကွယ်။ မေက အလေးမ မဟုတ်ဘူးကွဲ့ ။ ဒါပေမဲ့ကလေးမ လို့ အခေါ်ခံရတော့ ဟဲ ဟဲ
မှီရေ ….. ဆောရီးပါကွယ်…………..
မမှီရေးတဲ့ ၀ထ္ထုလေး အရမ်းကို ထိမိပါတယ်…. ။ အားပေးပါတယ် … ။
အိတ်ချင်းတူတာတောင် ထည့်တဲ့ ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီး တန်ဖိုးထားခံရတာကွာသွားပါတယ်… ။ ဒါပေမဲ့ မမှီရေ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာကလည်း မျက်လှည့်ပြသလိုပါပဲ… သူဌေးကတော် အခေါ်ခံချင်လို့ သူဌေးယူလိုက်မှ ကိုယ်နဲ့ ရပြီး ခဏတွင်း ချွတ်ခြုံကျသွားတာမျိုးလည်းရှိလာသလို… မရှိမရှား ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်ရင်း တဖြည်းဖြည်းကြီးပွားပြီး သူဌေးကတော်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်….။
ဒီပို့စ်နဲ့တော့မဆိုင်ပါ .. ကြွပ်ကြွပ်အိတ်သုံးစွဲမှု လျော့နည်းအောင်လုပ်တဲ့ တရုတ်ပြည်က နည်းတစ်ခု ပြောပြချင်လို့ ….
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်စပြီး တရုတ်ပြည်က စတိုးဆိုင်တွေမှာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ် အလကားပေးတဲ့စနစ်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ် … လာဝယ်တဲ့သူတွေက ကိုယ့်အိတ်ကိုယ်ယူလာရပါတယ် … မပါလာရင် ၀ယ်သုံးရပါတယ် … ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ဈေးကို နဲနဲတင်ထားလိုက်တော့ စေ့စပ်သေချာတဲ့တရုတ်မတွေက အလွယ်တကူဝယ်မသုံးတဲ့အတွက် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်သုံးစွဲမှု လျော့ကျသွားပါတယ် … ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အထူးစီမံထားသော အိတ်များကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးလာကြပါတယ် …
အင်း… အတွေးတွေက နည်းနည်းလွဲချော်နေသလိုပဲနော်။ ဘ၀မှာ မေတ္တာတရားက ရာထူးဂုဏ်ရှိန် ပညာ ဥစ္စာနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်။ ဟိုးအရင်တုန်းကတောင် ဘုရင့်သမီးတော်နဲ့ သူတောင်းစားနဲ့ယူကြတာတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးသားပဲ။ ဒီလူနဲ့ယူမှ ဒီလိုဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ လူတိုင်းကိုယ်စီ အရည်အချင်းဆိုတာ ရှိစမြဲပါပဲ။ ပညာမတတ်လို့ လူရာမ၀င်ဘူးဆိုတာတော့ ကန့်ကွက်မိပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်သာ ထားကြမယ်ဆိုရင် သဘာဝတရားကြီးက မမျှတတော့ဘူးပေါ့နော်။ အရမ်းချမ်းသာတဲ့ သူဌေးသားတောင် စာထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်မလား။ ခွက်ဆွဲတောင်းစားရတဲ့အဖြစ်ကို ရောက်ခဲ့တာပဲ ချမ်းသာလို့ယူလိုက်ပြီးမှ ဒီလိုဘ၀တွေရောက်သွားတာတွေလည်း ရှိနေတာပဲလေ။
etone ရေ မမှီက မျက်စေ့ရှေ့မှာကို ဖြစ်ပျက်သွားတာ မြင်ခဲ့တာ။ မမှီ အမ၀မ်းကွဲ တယောက်လေ အရမ်းအေးလွန်းလို့ ကြီးကြီးက စိတ်မချလို့ ဘဘရုံးက စကာတင် အရိုးသားဆုံးလို့ ယူဆရတဲ့ အရာရှိပေါက်စလေးနဲ့ အိမ်ထောင်ချပေးတာ။ အိမ်ထောင်သက် အတော်ကြာလာတော့ လူပျိုဘ၀က ဘီယာတောင် မသောက်တဲ့သူက ယစ်ထုတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ မိဘက အရာရှိကတော် ဆိုတဲ့ ဂုဏ်တင်တာပဲ ဒါပေမဲ့ အရက်သမားကတော်ဘွဲ့ရပြီး လင်ဆိုးမယားတဖါးဖါး ဘ၀နဲ့ လင်ကိုပြန်ရှာကျွေးနေရတယ်။ @ မနောရေ မမှီက ဒီပို့စ်မှာ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ မေတ္တာကို နှိုင်းယှဉ်ထားတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ပညာတတ်ခြင်း၊ မတတ်ခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်ထားတာလည်း မဟုတ်ပါဘူးနော်။ မိမိချစ်လို့ပဲယူယူ၊ မိဘပေးစားလို့ပဲရရ ကိုယ်ရလိုက်တဲ့ ယောက်ကျားရဲ့ ဂုဏ်သာ မိန်းမကို အရောင်ထင်စေတယ်လို့ ဆိုလိုထားတာပါ။ ရှင်ဘုရင်နဲ့ညားရင် ရှင်ဘုရင်ကတော် ဖြစ်သလို သူတောင်းစားနဲ့ ညားတော့ သူတောင်းစားကတော် အခေါ်ခံရမှာပါ။ အပေါ်မှာ ဆူးပြောထားသလို အစကတော့ သူလည်းအိတ်စုတ်ပဲ ဒါပေမဲ့ ကံကပါတော့ အထဲကသူ့ကျာက်တုံးက စိန်တုံးလိုဖြစ်လာတော့ သူဘာဖြစ်သွားလဲ စိန်အိတ်ဖြစ်သွားတယ်လေ။ မစ္စအိုဘားမားဟာ သမ္မတအိုဘားမားနဲ့ ၇နေလို့သာ first lady ဖြစ်တာပါ။ သူသာ သူတောင်းစားနဲ့ ရနေပါက first lady ဖြစ်ပါဦးမလား။ နောက် ဥပမာတခု ပထမ သူတောင်းစားယူထားလို့ သူတောင်းစားကတော် ဖြစ်နေပေမဲ့ အဲဒီ သူတောင်းစား ဘုရင်ဖြစ်သွားရင် သူ့မိန်းမလည်း သူတောင်းစားကတော်ကနေ ဘုရင်ကတော် ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါကို ဆိုလို ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မမှီလည်း ဒီပို့စ်မှာ ရင်တွင်းခံစားချက် ပါလို့ ဖြစ်မယ် အတော် လက်စ ပြင်းသွားတယ်။ စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ပေး၊ မန်းပေးလို့ အားလုံးကို တကယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မမှီပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်… ယောကျာ်းတယောက်ရဲ့ အရှိန်ဝါက အရေးကြီးပါတယ်… ။ ဒါပေမဲ့လည်းလေ …. အဲ့ဒီလို အရှိန်ဝါကြီးတဲ့ ယောက်ကျာ်းနားမှာ နေဖို့ရာ ပိုပြီး စိတ်ကျဉ်းကြပ်သလို ပြိုင်ဆိုင်မှူတွေ ၊ စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာတွေလည်း များပါတယ်… ။ လူအမြင်တော့ကောင်းပေမဲ့ … စိတ်ပင်ပန်းပါတယ် မမှီရေ…။ ကိုယ်ကောင်းတာ လိုချင်သလို … တခြား မိန်းကလေးတွေလည်း ကောင်းတာလိုချင်ကြတော့ …. ရုပ်ရှင်ရုံလက်မှတ်စီသလို ရမလားဆိုပြီး လာလာတိုးနေကြတယ်လေ…။
ယောကျာ်းတယောက်ကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ကိစ္စကတော့ မိန်မတွေရဲ့ အရည်ချင်းပါပဲ … ။ကိုယ်က ထိန်းသိမ်းတတ်လျှင် လိုရာပုံသွင်းနိုင်မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ရာထူး ၊ ဂုဏ်သိမ်တွေကတော့ ဟပ်ချလောင်းဆိုပြီး ဖန်ဆင်းလို့တော့ မရဘူးပေါ့… ။ လက်ရှိဘ၀လေးကိုပဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြုပြင်သွားမယ်ဆိုလျှင် ကြာတဲ့အခါ … ဘာကတော်ညာကတော် မဟုတ်လျှင်တောင် …သူဌေးမ ၊ သူဌေးကတော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့…. ၀င်ရောက်ပေရှည်သွားပါတယ် မမှီရေ… ။
မမှီရေ ၀ထ္ထုလေးက အရမ်းကိုကောင်းပါတယ် မမှီရဲ့ အတွေးလေးလြ ကောင်းပါတယ် .ဆက်ေ၇းပါ အားပေးနေမယ်နော် …
မမှီရေ … တွေးထားပုံလေးကောင်းပါတယ် … မှန်တယ်လို့လဲယူဆမိပါတယ်
နှစ်ယောက်ပေါင်းလို့ ဘ၀တစ်ခုထူထောင်ရင်တောင် … ယောက်က်ျားရဲ့ အရှိန်အ၀ါက မိန်းမတွေပေါ်မှာ ပိုပြီးရောင်ပြန်ဟပ်တယ် … ကျွှန်းကိုင်းမှီ ကိုင်းကျွှန်းမှီ ပဲလေ… ပြီးတော့ယောက်က်ျားတွေကို အများဆုံးအကြံဉာဏ်ပေးတာလဲ မိန်မတွေပဲ မဟုတ်လား ….
ကျွတ်ကျွတ်အိတ် ထဲကို စိန်တွေရွှေတွေထည့်ပြီးမရောင်းသလို
ကတ္တီပါအိတ် ထဲကိုလည်း အသားငါးတွေထည့်မရောင်းပါဘူး
သူ့အိုးသူ့ဆန် ကတော့ ၇၀% ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီပို့လေးဟာ အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ဥပမာ အိပ်တစ်အိပ်ပေါ့ ဘာအိပ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့
ချီးထည့်တော့ ချီးအိပ်ဖြစ်တာပေါဗျာ :D :D :D
ကိုရင်အောင်ပုရေ ကိုရင်ပြောသလို ပြောချင်တာပါ။ အိတ်ချင်းတူပေမဲ့ အထဲက ပစ္စည်းကွာလို့ အိတ်တန်ဖိုး ကွာသွားတယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပါယ်ကို ဒက်ထိ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်အောင် မှီ မရေးနိုင်သေးဘူးနော်။ ထပ်ပြီးလေ့ကျင့်ရဦးမှာပေါ့။
အခုလက်ရှိ ဘာအိပ်လို့ သတ်မှတ်တာခံရ ခံရ။ အိတ်က ကွာလတီ ကောင်းရင်ပြီးတာပဲ။
အင်း လောလောဆယ်တော့ ဗိုက်ဆာနေတယ်။
ကောင်းလိုက်တဲ့ စကားလေး။ eros ရေ ကျေးဇူးပဲ။ ဒါပေမဲ့ ယောက်ကျားအရောင်နဲ့ ပါးပြောင်ပြီး ဘ၀င်လေဟပ် နေတာတွေ မြင်ရလွန်းလို့ တခါတခါ အတော်ခံရခက်တယ်။ အိတ်က ကွာလတီ သိပ်ကောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့။ မပြည့်တဲ့အိုး ဘောင်ဘင်ခတ်တတ်တယ်လို့ သည်းခံပြီး နှလုံးသွင်းနေတယ်။
မှီရေးတဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်မိပါတယ် … အရေးအသားကောင်းတယ်လို့ ချီးကျုးပါတယ် …
ဖိုနဲ့မ.. လူသားတွေမှာ ရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်..။
မိန်းမတွေက(အိပ်ဆိုရင်).. အထဲထည့်မဲ့ ပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာပါပဲ..။
ယောက်ျား(အထဲကပစ္စည်း)လည်း.. အိပ်ကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်..။
နုစဉ်က.. နှလုံးသားနောက်ပါပြီး.. ပြုခဲ့မိလို့…..မလိုက်မလျှောမညီမထွေဖြစ်နေရင်တောင်.. ပြန်ပြင်ရဲတဲ့ သတ္တိတော့ ရှိကြစေချင်ကြောင်း..။
သက်မဲ့ဖြစ်တဲ့အိပ်ကလေးတွေကတော့ သူတို့က အပြုခံသက်သက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိသလို ပြုသမျှနုရတာပေါ့။
အဲတော့ ကျနော်တို့သက်ရှိတွေက ကိုယ့်ဘာသာကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိနေတော့
ဘယ်အိတ်အမျိုးအစားထဲကို ပါချင်သလဲ?လို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးခွန်းတွေမေးပြီး ကြိုးစားကြည့်ရုံပေါ့ဗျာ။
ဟုတ်တယ် သူကြီး ………. အမှားသိရင် ပြန်ပြင်ရဲတဲ့သတ္တိတွေရှိစေချင်တယ်။ တစ်သက်လုံး စိတ်ဆင်းရဲနေမယ့်အစား ပြန်ပြင်ရဲရမှာပေါ့နော်။